Isazi Semalt Sichaza Izinhlobo Ezi-4 Zamasayithi E-WordPress
Ukuba khona kwakho kwi-intanethi kungasiza umkhiqizo wakho uzizwe uqobo futhi uzothuthukisa inani kanye nedumela ngaphambi kwamakhasimende angakhona. Uma ungumuntu ekuzingeni umsebenzi, ungase ufune ukuba nenani eliphezulu lokuphumelela okungenzeka ngephothifoliyo. Kuphephile ukusho ukuthi i-WordPress iyisisombululo esihle kakhulu kunazo zonke kuzo zonke izinkinga zakho kwi-intanethi. Uma ufuna ukwenza ukwazi kwakho ku-intanethi, i-WordPress izosebenza njenge-akin eqenjini lezakhiwo futhi izosiza ukuklama noma yini kusuka kumasayithi alula kuya kumakhasi we-web professional.
U-Oliver King, isazi esihamba phambili se Semalt , ubheka izinhlobo ezingu-4 eziyinhloko ongazakhela kalula nge-WordPress namanye amathuluzi azokusiza wenze isayithi elihle kakhulu futhi elivelele ngesikhathi esithile.
1. I-eCommerce iwebhusayithi
I-Whiskey yindawo esithengisa i-Whisky yaseScotland, futhi yakhiwe ku-WordPress. Izingosi ezifanayo ze-e-commerce zavela ngenxa ye-WordPress. Uma unenkampani enkulu ye-Amazon futhi ufuna ukuvumela umhlaba wazi ngakho, i-Wordpress iyona ndlela engcono kakhulu kuwe ngoba izokusiza ukuba ufinyelele inani elikhulu labantu. I-Amazon iyinkampani enhle kakhulu enkampanini eqhutshwa yiyona enye ngaphandle kweWoCommerce, futhi ukuklama kwayo kusekelwe esihlokweni esiyingqayizivele se-Divi WordPress. I-WooCommerce empeleni i-plugin yi-Automattic, futhi inezici eziningi zesitolo. Le plugin ikhona ku-WordPress yakho futhi ingafakwa nganoma yisiphi isikhathi. Iqukethe izinhlobo eziningi zokukhethwa kanye nezici, zombili ezikhokhelwayo futhi mahhala. Enye into ongazama ngayo i-Easy Digital Downloads kanye ne -Themes Exchange..Kukusiza ukuba uthuthukise isitolo se-intanethi usebenzisa i-akhawunti yakho ye-WordPress. Akufanele ukhohlwe ukuwasebenzisa nge-WooCommerce ngezici eziningi nezinketho.
2. Amabhizinisi webhizinisi
Uma ufuna inkampani ephrofayili ephezulu noma indawo yebhizinisi njengoMercedes-Benz, i-WordPress yindlela efanele kuwe. Le nkampani yokukhiqiza imoto ikhethe i-WordPress futhi yaba omunye wemikhiqizo enhle emhlabeni. Kuye kwaqokomisa ngokuphelele ukubonakala kwayo futhi kwabonisa inombolo enkulu yezimoto ukubandakanya abasebenzisi abaningi nangaphezulu. Iwebhusayithi yayo inezihloko zenkambiso ezimnyama ezinomsoco ezihlanganiswa nomkhiqizo wazo kanye nezimoto. Kuyiqiniso ukuthi i-WordPress inezinhlobo eziningi zama-plugin, ongawasebenzisa ukudala ifomu lokuxhumana nathi, izithombe zeslayidi, izigaba ze-FAQ nabanye.
3. Izindaba zezindaba
Izindaba zezindaba ezifana ne-CNN kanye ne-MTV News zenze i-WordPress kuma-newsstand e-intanethi. Zombili lezi zingosi zinamathelisi amakhulu emhlabeni futhi aziwa ngezakhiwo nezindawo zabo eziyingqayizivele. I-MTV idlala isitayela esimangalisayo futhi ihlela okuthunyelwe kwayo ngokukhethekile. Okufanayo isimo ne-CNN. Isihloko abakhethileyo sibonisa izici eziyisisekelo zamiklamo yesimanje, lapho izithombe nokuqukethwe kuhlanganiswa ngokungenasici. Nge-WordPress, ungakwazi ukuklama kalula amasayithi afanayo futhi usebenzise ama-plugins ayo okukhethwa kwabavakashi, ibhokisi labalobi, ukwabelana ngemidiya yezenhlalo, neminye imisebenzi. I-IssueM yi-plugin engcono kakhulu ukuze uthole lezi zinto zenziwe.
4. Imiphakathi e-inthanethi
Kumelwe ukuba uzwile ngekhishi elihlwabusayo. Lona indawo lapho abathandi bokudla beza khona bese behlanganyela izindlela zabo zokupheka ku-intanethi futhi baxoxe ngemikhuba yabo yokudla. Leli sayithi liqhubekela phambili ku-BuddyPress, i-plugin evulekile yomthombo we-WordPress ithuthukiswe futhi iqaliswe yi-Automattic. Le plugin inikeza konke okudingekayo abantu ukuthi baqale ngezindaba zenhlalo. Ungakwazi kalula ukudala umphakathi woku-intanethi usebenzisa le plugin futhi uhlanganyele abafundi abaningi futhi.